နိုင်ငံအဝှမ်း သေနတ်အကြမ်းဖက်မှုက အမေရိကန်အတွက် ပြဿနာကြီးဖြစ်နေဟု ဆောင်းပါးဖော်ပြ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် အယ်လင်တန်မြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုအား NBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နယူးယောက် ၊ ဇွန် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
သေနတ်အကြမ်းဖက်မှုသည် မြို့တွင်းပြဿနာတစ်ခု ၊ မြို့တော်အတွင်းပိုင်းပြဿနာတစ်ခု ၊ အပြာရောင်မြို့တော် သို့မဟုတ် အနီရောင်ပြည်နယ် ပြဿနာတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ယင်းမှာ “ အမေရိကန်ပြဿနာတစ်ခု” ဟူ၍ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဝါရှင်တန်ပို့စ်(Washington Post) သတင်းစာတွင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်။“ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ကုန်ပိုင်းက သေနတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာ ဇွန် ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာတော့ ဆုတောင်းမှုတွေ ပေးပို့တာဟာ သိပ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ၊ မယုံကြည်နိုင်အောင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းခါယမ်းကြတယ်၊ ပြီးတော့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကို သီးသန့်ပြန်ပြီးဂုဏ်ပြုကြပါတယ် ” ဟု ဆောင်းပါးထဲတွင်ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်လည်း ဝါရှင်တန်ဒီစီ ၊ ချီကာဂို ၊ လော့အိန်းဂျလိစ် ၊ ဒက်ထရိုက် နှင့် နယူးအော်လင်း စသည့်မြို့ကြီးများသည် နိုင်ငံ၏ “ လူသတ်မြို့တော်များ” ဖြစ်နေကြကြောင်း အချက်အလက်က ဆိုသည်။ ယင်းစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်လာသော နောက်ထပ်မြို့သစ်များမှာ အော်ရိုရာ ၊ နယူတောင်း ၊ ပက်လန်း ၊ ဘက်ဖလိုး ၊ Uvalde စသည့်မြို့များဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါး က ဆိုသည်။
“ ဒါကြောင့်အခုအခါမှာတော့ သေနတ်ပစ်အကြမ်းဖက်မှုဟာ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် (Zip code) မရှိတော့ဘူးဆိုတော ကျွန်တော်တို့ သဘောပေါက်ခဲ့ရပါပြီ ၊ အဲဒီအရာကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ” ဟူ၍ ဆောင်းပါးတွင် မေးခွန်းထုတ်ထားပြီး “ ဒီစီမြို့က သေနတ်ပစ်အကြမ်းဖက်မှုဟာ မြို့တော်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ၊ အဲဒါဟာ အမေရိကန်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားသည်။
“ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေးလေးနက်နက် ဆက်ပြောပါရစေ ၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်ပွားနေတာဟာ လုံးဝ သီးခံလို့မရတော့ပါဘူး ၊ အဲဒီသေနတ်တွေကို လမ်းမတွေပေါ်ကနေ ရှင်းလင်းသွားအောင် ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်မနေ ဆက်လုပ်သွားရပါမယ် ” ဟု ဒီစီမြို့တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် Brianne K. Nadeau ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။(Xinhua)
NEW YORK, June 21 (Xinhua) — Gun violence is not an urban problem, an inner-city problem,ablue city orared state problem, but “an American problem,” said an article published by The Washington Post on Monday.
“Americans are good at sending Monday morning thoughts and prayers after seeing those reports of weekend violence. We shake our heads in disbelief and privately congratulate ourselves for living in the suburbs,” said the article.
“I will continue to emphasize this: the continued availability of firearms cannot be tolerated, and we must continue our work to get guns off the streets,” Brianne K. Nadeau,aD.C. council member, was quoted as saying.
Photo- Photo taken in Arlington, Virginia, the United States, on June 19, 2022 showsascreen displaying the scene ofashoo